५०औं दिनमा खुलेको शेयर बजार एक घण्टामै २१.९३ अंकले घट्यो
वैशाख ३०, काठमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गराउने गरी ५० दिनमा खुलेको शेयर बजार एक घण्टामै २१ दशमलव ९३ अंकले घटेर १ हजार २२९ दशमलव ५२ विन्दुमा झरेको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक १ दशमलव ६९ प्रतिशत घटेको हो । एक घण्टाको अवधिमा कारोबारमा आएका १० ओटै समूहको परिसूचक घटेको छ ।
यस दिन एक घण्टाको अवधिमा १६७ कम्पनीको ६७ पटकको व्यापारमा रू. १० करोड २७ लाख ५९ हजार बराबरको ९९ हजार ३७४ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यस अवधिसमम नागरिक लगानी कोषको सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार भएको छ । नागरिक लगानी कोषको प्रतिशेयर रू. २ हजार ३६७ मा रू. ८ करोड ८८ लाख ५७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस अघि चैत ९ गतेको अन्तिम शेयर कारोबारमा नेप्से परिसूचक १ हजार २५१ दशमलव ४५ विन्दुमा थियो ।
यस दिन अघिल्लो दिनभन्दा नेप्से परिसूचक १८ दशमलव २० अंकले घटेको थियो । १२३ कम्पनीको शेयर कारोबार भएको यस दिन रू. १९ करोड ४६ करोड ४२ लाख बराबरको कारोबार भएको थियो ।
यस दिनको बजार पूँजीकरण रू. १६ खर्ब १९ करोडभन्दा बढी थियो । उक्त दिन नेप्से सेन्सेटिभ इन्डेक्स २७१ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा थियो । यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २ दशमलव ७६ अंकले घटेको थियो ।
लकडाउनका विच कारोबार सुचारू गर्न लागेको नेप्सेले कारोबारमा आउन सक्ने सम्भावित गुनासाहरु समाधानका लागि हेल्प डेक्सको स्थापना गरेको छ । कारोबारका क्रममा कुनै पनि समस्या आएमा टोल फ्रि नम्बर १६६००१२५०२५ मा सम्पर्क गर्न नेप्सेले भनेको छ ।
दैनिक विहान ११ बजेदेखि दिनको १ बजेसम्म जम्मा दुई घण्टा कारोबार हुने गरी बजार खुला भएको हो ।